Wararka - Farqiga u dhexeeya filimka PE / PVC / POF ayaa yaraanaya
1. Qeexitaano kala duwan:
Filimka 'PE' waa maaddo leh adkeyn aad u wanaagsan, mana sahlana in lagu burburiyo saliidda caagga ah ee caadiga ah. Sababtoo ah filimka PE waa mid jilicsan oo adag, ma fududa in la jajabiyo, iyada oo aan lagu xusin heerkulka sare ee qalabka xawaaraha sare leh, taas oo ka dhigi doonta LDPE inuu dhalaaliyo oo uu u hoggaansamo daabka. Daawada 'PE pelletizing' waxaa si toos ah loogu ridi karaa dekedda quudinta ee soo-saaraha xargaha, waxaana filimka 'PE' lagu soo jiidayaa foostada xoogagga xiiridda ee furka si loo kululeeyo, loo dhalaaliyo, loona soo saaro si loo iibsado. Maaddada heerka koowaad ee ay soo kabsatay PE wali waa la afuufi karaa filim, oo loo adeegsan karaa baakadaha aan cuntada ahayn iyo dawooyinka, iyo sidoo kale waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa soosaarka maqaarka Oxford iyo tarpaulin, oo leh mustaqbal ifaya.
PVC polyvinyl chloride, oo ay ku jiraan maaddooyin dheeri ah si kor loogu qaado caabbinta kuleylka, adkeynta, ductility, iwm. Lakabka kore ee filimkaan dusha sare waa lacquer, qeybta ugu weyn ee dhexda ku jirta ayaa ah polyvinyl chloride, lakabka hoose waa nacnac gadaashiisa lagu dhejiyay. Waa nooc ka mid ah walxaha macmalka ah ee si wanaagsan loo jecel yahay, loo jecel yahay, aadna looga isticmaalo adduunka maanta. Waxyaabaha soo saari kara filimada dusha sare ee saddexda geesood ah, PVC waa sheyga ugu habboon.
POF macnaheedu waa filim kuleylka yareyn kara. POF wuxuu u taagan yahay filim lakabyo badan oo iskudhafan oo polyolefin ah. Waxay u isticmaashaa polyetylen-cufan hooseeya oo toosan sida lakabka dhexe (LLDPE) iyo co-polypropylene (pp) sida lakabyada gudaha iyo dibedda. Waa la balaastiigay oo laga soo saaray mashiinka, ka dibna lagu farsameeyay habab gaar ah sida dhimista sameynta iyo sicir bararka filimka.
2. Isticmaal kala duwan:
PE kuleylka filimka yareyn kara ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhammaan baakadaha khamriga, gasacadaha, biyaha macdanta, cabitaannada kala duwan, dharka iyo alaabada kale. Badeecaddu waxay leedahay dabacsanaan wanaagsan, saameyn ku caabbinta iyo iska caabbinta ilmada, mana sahlana in la jebiyo oo cabsi laga muujiyo. Qoyaanka iyo heerka yaraanshaha oo sarreeya.
Sababtoo ah sifooyinka gaarka ah ee PVC (roobka-caddeyn, dab-u-adkaysi, anti-ma guurto, fudud u qaabeynta) iyo astaamaha hoose-gelinta iyo wax soo saarka sare ee PVC, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha qalabka dhismaha iyo warshadaha baakadaha. Sidaa darteed, filimka PVC wuxuu leeyahay daahfurnaan sare, dhalaal wanaagsan iyo yaraansho. Noocyada heerka sare.
POF waa nooc ka mid ah filimka kuleylka yareyn kara, inta badan loo isticmaalo baakadaha alaabada leh qaabab joogto ah iyo kuwa aan caadi ahayn. Iyada oo ay ugu wacan tahay ilaalinta aan sunta ahayn iyo deegaanka, hufnaanta sare, yaraanshaha sare, kuleylka-ku-xirnaanta wanaagsan, dhalaalaya sare, adkaanta, iska caabbinta ilmada, Waxay leedahay astaamaha kulaylka kulaylka isku midka ah oo ku habboon baakadaha xawaaraha sare leh. Waa badeecad beddel u ah filim dhaqameedka PVC ee kuleylka yareyn kara.
Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay alaabada baabuurta, alaabada caagga ah, qalabka xafiisyada, buugaagta, elektarooniga, looxyada wareega, MP3, VCD, farsamada gacanta, muraayadaha sawirada iyo alaabada kale ee alwaaxda, alaabada lagu ciyaaro, sunta cayayaanka, waxyaabaha maalinlaha ah ee loo baahan yahay, cuntada, qurxinta, cabitaanka qasacadaysan, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, daawo, Alaabta sida cajaladaha iyo cajaladaha fiidiyaha.
Polyolefin Pof Shrink Film, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Duubista Polyolefin Pof, Iskudhin Duubista Filimada, Yaree Filimka PCv, Polyolefin Iskudhin Heerkulka,